Inspiration - Creativos an-tserasera | Creativos Online (Pejy 3)
Durex doka famoronana
Ny doka famoronana nataon'i Durex dia miteraka fiatraikany eo amin'ny mpampiasa noho ny fampiasana fiteny mahasarika maso, tany am-boalohany, misy masiaka ary misy hevitra maro ao ambadika hiresaka tsara.
Carmen amin'ny faha-87 taonany dia gaga anay tamin'ny sary nataony tao amin'ny MS Paint
Carmen de Valencia, tamin'ny faha-87 taonany, dia nanjary nalaza be noho ireo sary amoron-tsiraka ny tanàna misy azy noho ny MS Paint.
Mpanavakava-pananahana nalaina sary iray izay miady amin'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny alàlan'ny fampiasana zavakanto ho fitaovana hahatratra an'izao tontolo izao sy hisamborana ny hafany. Hihaona amin'ity mpanakanto kanto ity.
Mpaka sary mivezivezy izao tontolo izao maka sary varavarankely sy varavarana mahafinaritra
Andre Vicente Goncalvez, mpaka sary, dia naka ny votoatin'ny tanàna tamin'ny sariny varavarana sy varavarankely.
Ny hoavin'ny lamaody mifampikasoka amin'ny fanontana 3D
Ny tontolon'ny lamaody dia miova tsy tapaka ary satria ny ankamaroan'ny indostria dia voataonan'ireo fandrosoana ara-teknolojia, eto izahay dia milaza aminao ny fiantraikan'ny fanontana 3D eo aminy.
Light Phone 2: Ny kinova vaovao an'ny anti-smartphone
Light Phone 2 no tsimbadika vaovao an'ny telefaona antsoina hoe dethrone smartphone. Farafaharatsiny mba hampianarana an'io vahoaka io izay tsy mahay misafidy fotoana tokana raha tsy misy ny smartphone
Ny sticker sticker an-tanàn-dehibe dia fomba iray hafa handokoana ny sary hosodoko
Ny sticker sticker an-tanàn-dehibe dia fomba iray hafa handokoana ny sary hosodoko graffiti izay mahavita mampiseho fahaiza-mamorona eny an-dalambe, na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona, dia afaka mahita ny iray amin'ireo sanganasa kanto kely ireo isika. Lazao izay eritreretinao, tsikerao izay tsy tianao amin'ny fampiasana sticker kely.
Ianaro ny fomba hamoronana doka famoronana mahomby izay miasa ary mahomby hahatrarana mpihaino marobe. Ianaro ny fomba fototra hamoronana karazana sary dokam-barotra.
Raha mpandraharaha ianao, ity fandaharam-potoana ity dia hanampy anao handefa ny traikefa nahafinaritra anao
Rehefa reraky ny manoratra ny resume ianao na miasa amin'ny orinasa tsy manentana anao dia lasa mpandraharaha ianao, ity fandaharam-potoana ity dia hanampy anao handray an'io dingana io amin'ny fomba voajanahary sy tsotra kokoa.
Famolavolana bara sokola tsy mety amin'ny diabeta
Famolavolana bara sôkôla tsy mety amin'ny diabeta liana amin'ny famoronana sy sôkôla avo. Ny famolavolana an'ity karazana fanohanana ity dia naka fanahy foana ny mpamorona rehetra.
Raha nanontany tena ianao hoe nanao ahoana ny andian-dahatsoratra "Game of Thrones" raha napetraka tamin'ny taona 80 tany dia ho hitanao eto izany.
Ny fanesoana sy ny tsikera ara-tsosialy dia manao veloma ny mpanao hatsikana sary mamirapiratra antsoina hoe Forges izay tsy hohadinointsika ary iza no halahelo antsika.
Jacopo dia mpanakanto mahay mampianatra tena izay mampiseho ny fomba hahatratrarana ny jeneraly amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny làlan'ny tenany manokana amin'ny fanabeazana zavakanto.
Ny Cat Thing dia manome trano vaovao ny saka hahafahan'izy ireo miala voly sy miala sasatra noho ny rafitra modely baoritra vaovao ahafahany mamorona rafitra mahafinaritra.
Ny fanovana tokony hataonao mba hamoronana endrika bebe kokoa
Ny fanovana tokony hataonao mba hamoronana endrika bebe kokoa rehefa tsy afaka miala eo am-pandriana ara-potoana ianao. Na rehefa tsy araka ny nantenanao ny asanao. Asehoy izay azonao atao amin'ny fanaovana an'io.
Mampiseho aminao ny lalao karatra famoronana nataon'i Matt izahay
Ny lalao karatra famoronana an'i Matt dia mifototra amin'ny tokotanin-tsambo toy ny Espaniôla na poker fa manome aingam-panahy ny tetikasanao amin'ny famoronana amin'ny fikitihana manokana sy tokana.
Ilay sary vongana mitsinkafona izay manarona ny ben'ny tanàna Plaza ao Madrid mandritra ny faha-XNUMX taonany
Ny ben'ny tanàna Plaza any Madrid dia voaravaka andro vitsivitsy niaraka tamin'ny sary sokitra Echelman izay manarona ny lanitra Madrid amin'ny loko.
Kalandrie mamorona El Collagendario noforonina miaraka amina collage
El Collagendario dia kalandrie mamorona noforonina miaraka amina collage mba hahazoanao aingam-panahy amin'ny fomba hafa sy mamorona. Tetikasa tena mahaliana ho an'ireo rehetra tia ity teknika plastika ity.
Ny mandala hypnotizing an'i James Brunt
James Brunt dia mpanakanto iray manangona ireo singa voajanahary afaka manome aingam-panahy azy hamorona ireo mandala tsara tarehy ireo.
I Islandy dia asehon'ity mpaka sary ity hitondra antsika eo alohan'ny zohy misy ranomandry izay miteraka fahatsapana mifangaro momba ny hatsaran-tarehy voajanahary.
Invader, mpanakanto an-tanànan'ny mosaika pixelated izay tsy fantatra ny mombamomba azy
Invader dia mpanakanto frantsay izay nidina an-dalambe tao Malaga handao ny fitombenany ary hitory ny Biraon'ny mpampanoa lalàna ao an-tanàna.
Ity mpanakanto ity dia mandoto ny biby fiompin'ny tompony mba tsy hahafaty azy ireo
Elise dia afaka mamerina mamorona ny biby fiompinao raha omenao 30 andro izy hamenoana ny baikonao. Raha manana saka toy ny biby ianao dia eritrereto izany.
Ny kanto manova izay tsy mendrika olona
Dillon dia mpanakanto iray izay mandany fotoana handinihana izay ho fanovana vaovao hataony; zavatra ilaozan'ny hafa ary ampiasainy.
Ny fanangonana Silaï an'ny mpamorona Charlotte Lancelot
Hodinihinay izay manintona ny fanangonana Silaï ataon'ny mpamorona belza Charlotte Lancelot, mifangaro amin'ny loko mamirapiratra sy endrika geometrika.
Rehefa lasa manan-danja kokoa ny typography amin'ny sarimihetsika toa an'i Han Solo: tantara Star Wars
Ny endri-tsoratra dia nanjary hazon-damosina ho an'ireo teasers, sary ary tranofiara vaovao ho an'ilay Han Solo vaovao: A Star Wars Story.
Lahatsoratra iray ho an'ireo mpitia litera nostalgika mitady fomba vaovao hamoronana tetikasan-tsary. Misy hetsika izay ny taolam-paty no mpiorina voalohany, iray amin'ireo novolavolaina tao amin'ny nosy Tenerife (Nosy Canary).
Ken Nwadiogbu amin'ny faha-23 taona sy ny sariny hyper-realistic
Mpanakanto iray hafa izay avy any Nizeria ary manana fikitika manokana momba ny sary hyper-realiste izay iantsorohan'olombelona afrikanina no miakatra eo afovoany.
Ny endrika ara-jeometrika ny mombamomba ny fizahantany rosiana vaovao hamporisihana ny fitsidihana ny firenena
Rosia dia namorona sary famantarana izay hampiasaina amin'ny doka isan-karazany hisarihana mpizahatany maro ho tonga ao amin'ny firenena.
Ny fahaiza-manaon'i Chiamonwu Joy miaraka amin'ny saribao sy ny sariny hyper-realistic
Chiamonwu Joy dia afaka mampiseho amintsika ny fahaizany mandrehitra sarin'olombelona amin'ny alalàn'ny saripika hyper-realistika izay manjelanjelatra amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter.
Fanapahana taratasy 120 8 no fanehoana kanto an'ity artista ity izay naneho ny lokon'ny fotoana any Japon hatramin'ny XNUMX Janoary tamin'ity taona ity.
Tapestry 77 metatra noforonina tany Irlandy dia mampiseho ny tantara epic an'ny Game of Thrones
Avy any Irlandy Avaratra dia noforonina ity tapestry 77 metatra ity izay maneho ny zava-nitranga tsirairay amin'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Game of Thrones.
Ireo sary drone an'habakabaka ireo dia hamela anao hiteny
Ny tambajotra Dronestagram dia afaka mitondra antsika any amin'ny tontolo hafa miaraka amin'ny sary drôna an'habakabaka marobe izay mampiseho toerana mampino.
Azonao atao izao ny mamantatra hoe iza amin'ireo olona aseho amin'ny sary no hitanao amin'ny Google Arts & Culture
Google Arts & Culture dia mamela anao haka sary hamantarana hoe iza ianao na iza avy amin'ireo tarehin-tsoratra amin'ny sanganasa kanto sary marobe
Portofolio famolavolana 21 hahitana aingam-panahy ho anao
Raha mitady aingam-panahy ho an'ny portfolio-nao matihanina ianao, ity andian-portfolio ity dia tonga lafatra mba hahitana an'io antsipiriany io izay mampiavaka anao amin'ny hafa.
Ilay Virjiny voasarona avy amin'i Giovanni Strazza
Ny Virjiny voasedra dia santionan'ny sary sokitra amin'ny hetsika artista nasionalista Italiana tamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Ny White House dia mankamin'ny WordPress
Ny antony dia ara-toekarena ary tahiry 3 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny mpandoa hetra rehefa mampiasa WordPress fa tsy Drupal.
Sary sokitra vato tsy misy simenitra na tsy misy lakaoly avy amin'i Devin Devine
Ny sary sokitra vato an'i Devine dia fomba iray hafa amin'ny fiatrehana ireo sary sokitra mety ho hitantsika any amin'ny valan-javaboary amin'ny tanàna rehetra.
Mamela tarehimarika hazo eny amin'ny araben'ny tanàna ny artista iray
Mampiasa sary hazo ity mpanakanto ity mba hamoronana fotoana sy sehatra manaitra izay mahasarika ny sain'ny mpandalo.
Faminaniana amin'ny marketing, famolavolana tranonkala ary marika ho an'ny 2018
Inona no ho fironana amin'ny marketing nomerika, famolavolana tranonkala ary marika ho an'ity taona 2018 ity? Jereo eto ny fironana ilaina amin'ny fampivelarana ny endrika mifaninana indrindra
Ny tarehimarika tamin'ny Renaissance dia navaozina tamin'ny fihetsika tamin'ny andro maoderina
Ireo sary sokitra ireo dia afaka namaky ny sasany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fa ny fijeriny, ny endriny ary ny endriny, dia mametraka antsika alohan'ny fotoana misimisy kokoa, noho izany, fotoana manaitra.
Ny pixel sy ny cubic an'ny sary sokitra Hsu Tung Han
Hsu Tung Han dia mpanakanto Taiwaney manana fahaiza-mamorona lehibe aseho amin'ity andiana sary an'ohatra an'ohatra misy piksela sy cubes ity
Ny famerenana amin'ny laoniny ny PET miaraka amin'ny tranokala Veronika Richterová
Mpanakanto Czech Veronika Richterová dia namorona famokarana zavamaniry sy biby mahafinaritra avy amin'ny tavoahangy PET voaverina
Famolavolana fonosana maharitra, ny maha-zava-dehibe azy ary ny tetikasa manome aingam-panahy
Satria zava-dehibe ny fandraisana ny endrika famonosana maharitra sy ny tetik'asa izay mampiseho ny fomba anaovan'ny mpanao endrika malaza azy indrindra
Ikea dia mampiasa taratasy marefo amin'ny urine amin'ity dokambarotra ity
Ikea dia manohy mampiseho fahaiza-mamorona amin'ny resaka dokambarotra sy fivarotana ny marika. Amin'ity indray mitoraka ity dia manao izany amin'ny dokambarotra amin'ny taratasy mora tohina izy.
Fanamboarana endrika sy endrika mampiavaka azy: entina amin'ny hoditra ny zavakanto
Fanamboarana endrika sy endrika mampiavaka azy: entina amin'ny hoditra mahavita mamorona sangan'asa tena izy ny zavakanto. Tsy misy dikany ny tontolon'ny sinema, sary ary dokam-barotra raha tsy misy ny asan'ireto matihanina ireto. Fantaro bebe kokoa ity tontolo kanto ity.
Ny endri-tsoratra vehivavy sy ny sarimiaina Disney dia nohosorany loko kokoa noho ny voalohany
Staub dia mitondra antsika amin'ny fomba fahitany vehivavy Disney sy mpilalao sarimiaina toa an'i Mulan na Pocahontas, na koa ireo Supergirls.
Ny sary mana-saina sy mampihomehy an'i Nacho Diaz
Nacho Diaz dia mpanao sary Espaniola izay manao andiam-panoharana miaraka amin'ny faharanitan-tsaina ary afaka mitaona tsiky amin'ny tarehy.
Sary sokitra nataon'i Roger Coll sy ny fahazoantsika azy ireo
Raha mandika ireo sary sokitra noforonin'i Roger Coll izahay, dia manadihady hoe inona izy ireo ary ahoana no nahatonga ny mpanakanto hampivelatra ny foto-keviny
Ity mpivady ity dia manao izay hahatanteraka ny fivarotamboky ny nofinofisin'izy ireo hanatsarana izany
Ity mpivady ity dia naka aingam-panahy tamin'ny sary hitany tao amin'ny Pinterest mba hanatsarana ny fivarotam-boky izay ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahinin'izy ireo ankehitriny.
Sary fanoharana mampientam-po an'i Lynn Choi
Ny sarin'i Choi dia mampiseho ny mpivady amin'ny andavanandrom-piainany andavanandro ary ny fitiavana lehibe indrindra no lazaina amin'ny fihetsika tsotra indrindra.
Ireo tranonkala tsara indrindra mifototra amin'ny sary SVG
Ny sary SVG, noho ny lanjany maivana dia manan-kery tokoa amin'ny famoronana traikefa an-tranonkala mahatalanjona toy ireo aseho amin'ireo tranonkala ireo.
Amin'ny alàlan'ny toetrany, Babina dia mampiseho antsika ny tanàna tsara tarehy sy manandanja indrindra eto an-tany amin'ny sary manaitra iray.
Ity takela-potoana 6K amin'ny fandefasana roketa SpaceX ity dia nahagaga ny maro efa-andro lasa izay rehefa naka sary saripika an'arivony ity mpaka sary ity.
Tot-em ny rojo tonga lafatra ho fanomezana famoronana ho an'ity Noely ity
Tot-em ilay rojo tonga lafatra ho fanomezana famoronana ho an'ity Krismasy ity izay hahatonga ilay olona manokana tsy hanadino ny fanomezana anao.
Ny marika manamarika ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin'ny lalao haiady amin'ny taona 2018
Raha tianao ny famolavolana, ny marika amin'ny Tompondaka Eran-tany amin'ny Chess World 2018 dia tsy hamela anao tsy hiraharaha ireo olona sy olona tsy fantatra.
Mueck dia mpanakanto aostralianina tsy mitongilana izay mitady ny antsipiriany ao amin'ny karandohany miisa 100 goavambe izay ao anaty fampirantiana any Aostralia.
Ny Tany ho zavakanto: ireo sary zanabolana an'ny programa Landsat
Ireo sary nalaina tamin'ny satelita fandaharana Landsat dia fanehoana kanto amin'ny planeta Tany
Rehefa mirona amin'ny magazine toy ny Vogue na CG ireo andriambavy Disney
Ity mpanakanto Photoshop ity dia naka andriambavy Disney haka sary amin'ny lamaody sy ny gazety ankehitriny toy ny Vogue, Vanity Fair na CQ.
Ny mari-pamantarana ny Lalao Olaimpika tany Beijing tamin'ny 2022 dia tsy maintsy soratana
Efa manana ny mari-pamantarana azy ireo ny Lalao Olaimpika 2022 any Beijing. Ny logo sasany izay soloin'ny litera sinoa.
Ny sary manelingelina sy mamiratra an'ny duo Irina sy Silviu
Irina sy Silviu dia mpanakanto kolontsaina roa izay, tamin'ny fomba nitaizana tena, dia afaka nampiofana hampiseho ny andian-sangan'izy ireo amin'ity teknika ity.
Avy isan'alina sy alina any New York amin'ny sary 105 UHD
New York dia mamirapiratra amin'ity asa antsoina hoe "New York Transitions" ity ary azo alaina amin'ny sary VAST ho an'ny fanontana.
Ny sary hosodoko mahafinaritra an'i Yeuk Pang izay mampiseho ny tanàna manerana an'izao tontolo izao
Yeuk Pang dia mpandoko rano sinoa iray izay mahalala tsara ny lokony ary avy amin'ny kaontiny Instagram dia mampiseho ny fomba fahitany an'izao tontolo izao.
Ny sary flickr 25 tsara indrindra an'ny 2017
Raha toa ka anjaranao ny maka sary, io safidy noforonin'i Flickr io ihany dia hamela anao ho talanjona amin'ny kalitaon'izy rehetra.
Ireo no pika paoma mamorona indrindra azonao jerena
Raha ny mofomamy no fanananao, dia tsy hamela anao tsy hiraharaha ireo mpanao mofomamy izay nanaovana azy ireo nandritra ny herintaona mba hananana pint tsara be ireto mofo vita amin'ny paoma ireto.
Ity sary sokitra vato 3.500 taona ity dia afaka nanova ny tantaran'ny zavakanto araka ny ahalalantsika azy
Ny Combat Agate of Pylos dia vato kely voasokitra misy antsipiriany minn'ny anatomia olombelona.
Ny maritrano mahavariana an'ny tranomboky sinoa izay misy boky 1,2 tapitrisa
Any Chine no misy azy ary misy boky 1,2 tapitrisa azo vakiana amin'ny toerana malalaka misy famolavolana manokana.
Ny fitsipiky ny ampahatelony dia fototry ny tsipika izay ahafahantsika manoratra amin'ny hatsarana bebe kokoa izay sary hita maso hataontsika.
Ity mpaka sary ity dia nandany 10 taona naka sary ireo tranomboky tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
Görner dia naka sary nandritra ny 10 taona ireo tranomboky tsara indrindra amin'ny maritrano manerana ny planeta amin'ny andiany mahafinaritra iray.
Graffica ny magazine izay tokony ananan'ny mpamorona tsirairay
Graffica ny magazine izay tokony ananan'ny mpamorona rehetra ao an-trano raha te haharaka ny zava-bita farany amin'ny tontolon'ny famolavolana ianao.
Miteraka ao amin'ny hopitaly japoney eo an-toerana, miaraka amin'ny menio saika avy amin'ny trano fisakafoanana gourmet
Raha vakansy any Japon ianao dia fantaro fa raha bevohoka ianao, dia sakafo matsiro ihany ny sakafo ao amin'ny hopitaly.
Ity ny afisy vaovao an'ny Star Wars: The Last Jedi ary milaza fa hisy rà
Miditra an-tsehatra i Red amin'ny afisy vaovao an'ny Star Wars: The Last Jedi, ny fizarana vaovao an'ity epic saga ity izay ho tonga amin'ny 15 Desambra.
Boky samihafa ho an'ireo tia famoronana
Boky samihafa ho an'ireo tia mamorona mamorona mitady hampivelatra ny fahaizany mamorona amin'ny fomba hafa, mampiala voly ary tsy manam-paharoa.
Inona ny bokin'ny mpanakanto ary ahoana no hanampiany anao raha mpamorona ianao
Inona ny bokin'ny mpanakanto ary ahoana no hanampiany anao raha mpamorona ianao ary te hampiroborobo izay asa rehetra sisa tavela amin'ny sary kely tsotra.
Lahatsoratra Japoney misy sary tsara tarehy maherin'ny 1.000 no misy an-tserasera ankehitriny
Avy amin'i Smithsonian dia azonao atao ny misintona lahatsoratra an-tsary maherin'ny 1.000 hanarahana ny ampahany amin'ny tantaran'ny Japoney hatramin'ny taon-jato maro lasa izay.
Ny sarimihetsika voaloko solika voalohany dia mamelona an'i Van Gogh
Ny horonantsary voaloko solika voalohany dia namelona an'i Van Gogh tamin'ny vokatra tsy manam-paharoa izay nahasarika ireo tia kanto sy ireo tsy tia zavakanto.
Famonosana famoronana hanatsarana ny varotra vokatra
Fonosana famoronana hanatsarana ny varotra vokatra ary hisongadina eo amin'ny tsena amin'ny fomba am-boalohany sy famoronana.
Inktober ny fanamby ho an'ny mpanao sary mafana fo
Inktober ny fanamby ho an'ireo mpanao sary tia ranomainty izay te-hitsapa ny fahaizany kanto ary hampiroborobo ny asan'izy ireo amin'ny tambajotra.
Smartify no fampiharana «Shazam for Art» izay mamaritra ny sary hosodoko avy amin'ny tranombakoka manerantany
Smartify dia fampiharana iray izay manandrana manome anao fanazavana bebe kokoa rehefa manadihady asa an-tsary ao amin'ny tranombakoka. Fampiharana maimaimpoana ho an'ny iPhone sy Android.
Androany hanombohana ny famokarana ny antony manosika antsika manokana, jereo ity fampianarana ity. Atorinay anao eto ny fomba famoronana sary mitambatra.
Inona no eritreretin'ny trondro? Tetikasa fanoharana nataon'ny mpanakanto Amaya Uscola momba ny hevitr'ireto zavaboary anaty rano kely ireto.
Doka ara-tsosialy mamorona hanavotana ny planeta
Ny doka ara-tsosialy mamorona mba hamonjy ny planeta dia mitady hamorona karazana doka mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fahatsiarovan-tena fa tsy fivarotana vokatra.
Antony hananana Diary Famoronana
Ny diary famoronana dia manome anao fahalalahana bebe kokoa ary manaisotra ny vesatry ny fiandrasana tsy mahazo aina momba ny fihetsiky ny olona amin'ny hevitrao.
Javier Mariscal, rain'ny mpamorona an'i Cobi, mascot olympika, izay niavaka tamin'ny fombany sy ny fomba famolavolana azy.
Famokarana nomerika sy teknolojia vaovao hamolavolana vokatra mampiasa ireo rafitra fanamboarana vaovao ireo. Jereo ireto teknolojia vaovao ireto.
Paraidolia mahita tarehy amin'ny zavatra manodidina antsika
Ny paraidolia mahita tarehy amin'ny zavatra manodidina antsika dia ny fijerin'ny maso mahaliana izay mahatonga antsika hahita tarehy amin'ny teboka amin'ny rindrina na biby eny amin'ny rahona.
Ny sary poetika an'i Chema Madoz
Ny sary an-tsary poetika an'ny mpaka sary Chema Madoz dia mitondra antsika any amin'ny tontolo tsy azo antoka izay mampiseho zava-misy hafa amintsika ny zavatra.
Fitaovana famolavolana sary 5 misy atiny hita maso tsara
Manampy amin'ny marika ireo sary, mba hahafahan'izy ireo milaza ny tantarany sy mampita hafatra.
Ny maha-zava-dehibe sy fanasokajiana ny fonosana
Ampy ny kaontenera volondavenona, efajoro ary tsotra. Mandeha amin'ny maoderina indrindra izahay izao ary miresaka ny fomba vaovao hampiroboroboana ny vokatra.
CV tany am-boalohany
Manolotra anao maodely CV tany am-boalohany 40 izahay hahafahanao manavaka ny famerenanao ary hisarika ny saina amin'ny asanao vaovao.
Karatra ara-barotra mamorona sy samihafa ho an'ny orinasanao
Karatra ara-barotra mamorona sy samihafa ho an'ny orinasanao izay mampiavaka anao amin'ireo mpifaninana sisa. Mianara mamorona karatra famoronana.
30 taona ny tantaran'ny graffiti ao amin'ilay voapaika vita amin'ny rindrina
Mpampiasa iray no nanapaka tapa-rindrina tamin'ny toerana graffiti malaza any Netherlands mba hampisehoana tantara 30 taona an'ity karazana kanto an-dalambe ity.
Naif ny fomba famoronana ankizy tsy mampino feno loko
Naif ny volon-jaza feno famoronana feno loko dia mamela ny eritreritsika hanidina sy hitondra izany amin'ny tontolon'ny fahazazana izay azo atao ny zava-drehetra.
Lora zombie mpanakanto unicorn majika maro loko dia mahavita mamorona tontolo majika feno tandindona sy fahaiza-mamorona tototry ny loko.
Joel Robison sy ny tontolony majika sary dia sary famoronana ho an'ireo tia sary surreal.
"Tapakila 8" no anaran'ny divay organika izay ampiarahana amin'ity fonosana vaovao ity.
Nampiasaina tamin'ny famolavolana sary, ny Millennial Branding dia manondro ny tsy maintsy hiverenanao amin'ny endrika tsotra sy minimalista indrindra eo imasony.
Fanovozan-kevitra hamoronana tetikasa sary mamorona ary hanehoana an'izao tontolo izao ny mety ho mpamorona sary. Araraoty ny fahaizanao mamorona.
Ahoana ny fomba hamoronana kaody QR ho an'ny fampiroboroboana famoronana bebe kokoa
Ny famoronana kaody QR ho an'ny fampiroboroboana famoronana bebe kokoa dia safidy tsara hanatsarana ny fiantraikan'ny dokambarotrao. Mianara mamorona kaody QR.
Lisitry ny loko Pantone Colors 2017 farany
Pantone dia nivadika ho rafitra hamaritana ny loko ary apetraka ny feo sahaza azy izay matetika ampiasaina amin'ny famolavolana sary
Ny iray amin'ireo toetra lehibe ananan'ny mpamorona sary na tokony hananany dia tsy isalasalana fa ny famoronana. Ka mahaiza mamorona!
Fanovana ny dolara amerikana ho lasa asa mandika lalàna
Tsy maintsy manohina ny saina ny olona iray rehefa sendra ity asa ity izay afaka mitondra antsika alohan'ny karandohany misy dolara isan-karazany.
Emmanuelle Moureaux sy ny 'ala tanany'
'Forest of Number' dia vinavinan'i Emmanuelle Moureaux izay fanoharana ho an'ity tontolo izay iainantsika manodidina ny tarehimarika sy isa ity.
Ny tranombakoka lehibe indrindra any Etazonia dia mametraka sary 375.000 XNUMX maimaim-poana
Metropolitan Museum of Art any New York dia mametraka sary 375.000 afaka tanteraka amin'ny tranokalany ho an'ny rehetra.
Ny sary tsara tarehy tamin'ny fanendrena Oscars 2017 nataon'i Olly
Olly indray no mpanakanto mandrafitra sy misolo tena ny sarimihetsika tsara indrindra handalo amin'ity volana febroary ity ho an'ny Oscar.
David Bowie dia manohy manome aingam-panahy amin'ny sariny
David Bowie dia manohy manome aingam-panahy amin'ny sariny amin'ny alàlan'ny sary hosodoko, sary hosodoko ary fanontana sary, saingy tsy izany ihany, fa ho hajia ho an'ireo taratasinao
Ny sary famantarana Star Wars malaza dia manova loko ho mena ho an'ny The Last Jedi
Tao amin'ny teaser Disney omaly, ny sary famantarana Star Wars malaza izao dia nolokoina tamin'ny mena ka gaga ny mpankafy rehetra ny saga.
Anaty penina ity fanoharana momba ny zazavavy volo mena nataon'i Samuel Silvia
Samuel Silvia dia afaka niaraka tamin'ny penina Bic maro hamorona an'ity sary mahafinaritra ity izay mampiseho tovovavy volo mena manana maso manga.
Odeith dia mampiseho amintsika ny fahaizany mamorona amin'ny alàlan'ny fananganana andiana sanganasa izay miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana zoro sy fanomezana effets optika lehibe.
Toerana majika 5 hampivelarana ny sarinao
Toerana majika dimy ahafahanao mampivelatra ny sarinao, toy ny sambo matoatoa an'i Fuerteventura na ny Fuerte de Navarra, inona no fantatrao momba azy ireo?
Sary an'habakabaka Shakespeare manan-tantara 1.000 XNUMX maimaim-poana maimaim-poana
Manomboka androany dia azonao atao ny miditra amin'ny tahiry nomerika lehibe misy sary amin'ny sarimihetsika isan-karazany nataon'i Shakespeare tamin'ny vanim-potoana Victoria.
Kely tokoa ny sary sokitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka nilaina ny taratra X mba hamahana ny miafina
Ireo sary sokitra ireo dia 500 taona mahery ary mbola tsy fantatra ny fomba namoronana azy ireo. Ekipa mpikaroka iray mikendry ny hanazava.
Ity misy fomba fankalazan'ny mpanakanto eran'izao tontolo izao ny lova navelan'i David Bowie
David Bowie dia iray amin'ireo olo-malaza manintona sy manome aingam-panahy tato ho ato. Chameleonic sy transformative, ity no lovan'ny artista.
Ny sary hosodoko solika an'ny mpanakanto Michalis Makroulakis
Michalis Makroulakis dia mpanao hosodoko grika izay tena tia fatra-pitia sary an-tsary ary io asany io no anehoany ny talentany.
Fisehoan'ny zava-misy 10 mpanakanto amin'ny alàlan'ny pensilihazo
Ireo sary 10 ireo dia mametraka antsika alohan'ny zava-misy fa mahavita misambotra amin'ny alàlan'ny haino aman-jery toy ny pensilihazo sy ravin-taratasy ny mpanakanto iray.
Ilay vehivavy tamin'ny hosodoko hosodoko Nils Westergard natao tany Eropa tamin'ny 2016
Tamin'ny taona 2016 dia nitety an'i Eoropa i Nils Westergard mba handoko hosodoko isan-karazany izay ahitana vehivavy isan-karazany.
Ny illusions optique hypnotic ao amin'ny efitranon'i Peter Kogler
Kogler dia mpanakanto iraisam-pirenena fanta-daza izay manomana andiana fampirantiana izay ahazoan'ireo efitrano lanja lehibe
Ny manam-pahaizana amin'ny sarimiaina, ny effets visuels et ny lalao video, ny mpamorona nomerika ary ny sary dia nilaza taminay momba ny zavatra niainany lehibe tamin'ny orinasa lehibe.
Miandry antsika manodidina ny zava-misy virtoaly ahafahantsika milentika ao anatiny ary afaka mandoko ny graffiti rehetra tadiavintsika amin'ny rindrina.
Daniel Dust dia mpanakanto natokana ho an'ny sary hosodoko ary niavaka noho ny réalitéalisme-ny izay hita ao amin'ity sary hosodoko nataon'ny rahavaviny ity.
Ny tilikambo MahaNakhon ao Bangkok dia mampiseho ampahany amin'ny fitsipiky ny deconstructivism na izay fikorontanana voarindra amin'ny rafitry ny tranobe.
Tsy fahampian'ny hevitra amin'ny tatoazy manaraka? Klimt no valiny
Klimt dia iray amin'ireo mpanao hosodoko fantatry ny Modernisma indrindra ary ny sary hosodoko erotika tsara tarehy dia mety ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny tatoazy.
Pantone dia manambara ny lokon'ny taona 2017
Green dia handinika bebe kokoa amin'ny taona ho avy amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho 2017 Color of the Year ho an'ny marika Pantone, vondrona iray manontolo amin'ity.
Dokambarotra tsara tarehy sy Retro nataon'i Daft Punk
Daft Punk koa dia miavaka amin'ny famolavolana sy ireo doka izay mameno ny tranokalan'ny ofisialy izay nandinihany fanadihadiana tsara nandritra ny am-polony taona maro.
Sary mampiseho ny antsipirian'ny David's an'i Michelangelo mba hankafizanao bebe kokoa
Raha te hahalala ny antsipirian'ny David's an'i Michelangelo ianao, ireto sary zarainay ireto dia ahafahanao manakaiky kokoa toa anao eo aminy miaraka.
'Sombre 3D' no antsoin'i Odeith ho fombany manokana izay namboarina 3D tamin'ny singa sary samihafa tao anaty rindrina.
Ny fomba sary Vaporwave ho hetsika maoderina sy ankehitriny. Hiresaka momba an'io fomba io sy ireo mpanakanto mampiasa azy ho loharanon-tsary.
Isika rehetra amin'ny Krismasy dia tianay ny mandray sy mandefa Krismasy. Manome anao loharanom-pahalalana maimaimpoana ho an'ny Krismasy anao izahay.
Nanapa-kevitra ny hanova endrika ny sariny ny WeTransfer
Nanapa-kevitra ny hanova endrika ny sariny ny WeTransfer. Tsy mbola nanao fanovana lehibe toy izany ny orinasa hatramin'ny nanombohany ny taona 2009.
Ireo mpanakanto telo ireo dia mampiseho ny talentany amin'ny pensily sy saribao mba hitondrana antsika amin'ny sarin'ny zazavavy roa sy amboahaolo.
Inona no atao hoe fijanonana? Inona avy ireo vokatra azoko? Teknika be mpampiasa ve io ankehitriny? Manome anao fomba fijery an-tsary izahay eto amin'ity tontolo audiovisual ity.
Rafael San Emeterio, mpamorona Cantabrian, dia mandresy amin'ny fifaninanana natolotry ny Governemanta Cantabria ho an'ny endriny endrika orinasa.
Ny sary dia sary iray ho an'ny besinimaro an'ny orinasanao. Izay no antony maha-zava-dehibe ny fananana logo matianina. Manome anao torohevitra 5 lehibe ho an'ny logoo izahay.
Miverina ve ireo logo?
Misy fironana hiverina any Retro satria misy marika lehibe mamerina ny volavolany taloha mba hamerenany ny lanjan'ilay traikefa
Fitch dia mpanakanto nanana ny eritreritra lehibe hananganana trano kely hoso-doko sy handravahana ny ao anatiny miaraka am-pitiavana lehibe an'ireo vorona.
Fitaovana hanombohana ny famolavolana ny vokatrao toy ny kisary, vektor, endritsoratra ary endrika hafa ho an'ny sokajy samihafa. Mitadiava hevitra!
Hasui Kawase, mpamorona Japoney manan-talenta indrindra amin'ny hetsika kanto "Shin-Hanga"
Hasui Kawase dia iray tamin'ireo mpanohana ny hetsika zavakanto japoney fantatra amin'ny anarana hoe Shin-hanga. Mahafinaritra ny fiheveranao.
Bokin-tsarin'ny miaramila 21 taona tamin'ny Ady lehibe II
Ny Ady Lehibe Faharoa dia iray amin'ireo ady nahakivy indrindra. Ity miaramila 21 taona ity dia nampiasa ny bokiny hanoratany an-tsary.
Ity no sary famantarana Taco Bell vaovao haharaka ny mpihaino tanora kokoa ary amin'ny vanim-potoana nomerika ho an'ny rojom-pisakafoanana hainganana malaza
Betsaka ny tolo-kevitra ara-javakanto, fa ny iray mameno ny araben'i Toronto amin'ny renirano boky 10.000 no tena mahagaga.
Ity mpanakanto ity dia mamorona tombokavatsa 3D azo antoka ary tena misy famaritana
Raha mitady tatoazy kanto sy mampihetsi-po fotsiny ianao, ny tatoazy Arlo dia mahatalanjona fotsiny satria toa tsy toa izany akory, ny tatoazy.
Ravina malazo ho toy ny lamba farany ho an'ny sary
Kerby Rosanes dia mampiseho amintsika ny talenta lehibe ananany momba ny antsipiriany sy ny marimarina amin'ny fanaovana sary, toy ny fisehoan'io ravina maina sy mavo io.
'Toy ny ravina fararano' avy amin'i Neil Simone
Neil Simone dia mpanao hosodoko izay mampiasa vokatra tena mahavariana amin'ity asa antsoina hoe "Rehefa miala ny fararano" ity izay maneho ny vanim-potoana manokana amin'ny taona
Ny Parallel Studio dia miandraikitra ny fanangonana ireo fotoana mampalahelo indrindra amin'ny tsy fahombiazana sy ny lesoka ao anaty horonan-tsary manana kalitao tsara hita
Evan Hecox sy ny hetsika «School Mission»
Evan Hecox dia nahazo diplaoma tao amin'ny San Francisco Art Institute tamin'ny taona 90 ary mpikambana tao amin'ny fototr'ireo mpanakanto nanangana ny hetsika "Mission School".
Ity artista rosiana ity dia mamorona sary sokitra biby mahafinaritra amin'ny tanimanga volory
Evgeny Hontor dia mpanakanto rosiana naneho ny talenta lehibe nananany sary sokitra biby nofinofy nandritra ny 6 taona. Manana ny studio azy manokana izy.
Gorila iray noforonina miaraka amina pensilihazo miloko maromaro
Ity gorila ity dia noforonina tamin'ny pensilihazo maro loko, na dia asa ao amin'ny Photoshop aza izany raha hazavaina amin'ny fidirana.
Ny talen'ny sarimihetsika malaza dia natambatra tamin'ny endri-tsoratra malaza ananany
Ny tarehin-tsoratra malaza indrindra amin'ny talen'ny sarimihetsika Stanley Kubrick, Orson Wells na James Cameron dia mifangaro miaraka aminy.
'Aza manadala ahy' avy amin'i Katy Lipscomb
Katy Lipscomb dia mpanakanto miloko tonga tamin'ity sanganasa famoronana ity izay hanakorontana ny sainao mandra-pahafantatra ny vokatr'izany optika izany.
Mahazoa aingam-panahy avy amin'ireo makiazy Halloween ireo
Efa akaiky ny alina Halloween, ary i Tal Peleg no mampiseho ny talenta fanaovana makiazy ny masony ho fitaomam-panahy.
Pensilihazo miloko 8 ho an'ny volo tena mampino
Emmy Kalia dia artista holandey izay mampiseho ny fahaizany amin'ny pensilihazo miloko 8 izay ampiasaina handokoana an'io sanganasa asehony ao amin'ny YouTube io.
Olly Moss sy ny peta-drindrina 7 an'i Harry Potter ho an'i Pottermore
Olly Moss dia niverina niasa tamin'ny tsorokadokony sy ny sary hosodoko niomerika hametrahana ny tenany eo am-panaovan'i Harry Potter; amin'ity indray mitoraka ity dia toa an'i Pottermore.
Fantsika nolokoina fatratra amin'ny fety amin'ny alina Halloween
Ny manicure azon'ity mpanakanto atao hoe Piggieluv ity mety ho manokana sy mampatahotra amin'ny alin'ny Halloween.
Ity mpanakanto makiazy ity dia hanome anao hevitra mampatahotra Halloween
Ity mpanakanto makiazy ity dia afaka mamela anao ho talanjona amin'ny heviny amin'ny alin'ny Halloween izay tsy maintsy hampihorohoroinao ny namanao.
Nivadika sary sokitra angano ireo boky taloha
Su Blackwell dia mpanakanto anglisy izay mividy boky faharoa mba hanovana azy ireo ho sary sokitra angano
Pandora dia serivisy mozika streaming tsara izay nanavao ny logo azy androany hanehoana hevitra sy fahatsapana hafa.
Manoro hevitra anao aho mba hahazoanao sary vitsivitsy izay azonao raisina hatraiza hatraiza, 31 andro amin'ny Inktober izany ary tsy maintsy azo ampiharina isika.
Olly Moss sy ireo fonony 7 ho an'ny ebook Harry Potter
Olly Molly dia mpanakanto mpamorona afisy ary naneho ny talentany lehibe tao amin'ny fonony 7 amin'ny Harry Potter eBooks
Ny sangan'asa maroloko an'i Skwak misy fahaiza-mandanjalanja, hadalana ary famoronana
Skwak dia mpanao sary an-tsary frantsay manana loko, ireo olo-malaza strident ary ireo sary feno singa amin'ny tenimiafiny.
Mpanakanto poloney manaparitaka loko amin'ny dian'ny National Gallery ary mahavita vokatra mahavariana
Ity artista poloney ity dia nandray ny dian'ny National Museum an'ny fireneny hamadika azy ho korontana loko mifanohitra amin'ny sarivongan'ny gladiatera
Ravina maina ho canvas ho an'ireo sary mahafinaritra ireo
Hitan'ireo mpanakanto roa ireo ny ravina maina an'ny valan-javaboary izay nandehanany namakivaky ny lamba mba handokoana ireo sanganasa zarainay avy eto.
Ireo biby tsara tarehy any Origami avy amin'i Gonzalo Calvo
Origamiela mahafatifaty tsara tarehy izay ovain'ny tanan'ny mpitendry zavamaneno atao hoe Gonzalo Calvo izay afaka mamorona azy ireo amin'ny fotoanany maimaim-poana.
Sarotra hazavaina sary 5 raha very ny fitadidianao ny momba ny Photoshop
Raha very tampoka teo amin'ny tontolon'ny Photoshop ny fahatsiarovana, ahoana no hanazavanao ireo sary dimy namboarina ireo?
Sary 5 namboarina tamin'ny fomba nahagaga talohan'ny vanim-potoanan'ny Photoshop
Amin'izao fotoana izao dia zatra photomontages misy kalitao tena tsara isika, saingy talohan'ny vanim-potoanan'ny Photoshop dia nisy mpanakanto talenta lehibe.
Ireo sary famantarana maherifo dimy malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra
Logo 5 izay ho fantatrao amin'izao fotoana izao ary hamantatra ireo maherifo malaza indrindra amin'ny sary an-tsary sy ny efijery lehibe.
Ireo no loko 10 an'ny 2017 araka ny filazan'i Pantone
Tamin'ny Fashion Week New York tamin'ny herinandro lasa teo, ny Pantone Institute dia namoaka ny loko fototra 10 ho an'ny Lohataona 2017
Fijerena ity projet 3D mahavariana natao tany Romania ity
Limelight dia ekipa mpamorona an'ity projet 3D an-tsarintany mahavariana sy epic ity ao amin'ny Parlemanta Romanian manoloana ny mpijery 40.000.
Lahatsary fanadihadiana ilaina amin'ny famolavolana sary: ​​«Helvetica»
Helvetica: horonantsary fanadihadiana ilaina amin'ny mpamorona sary rehetra, izay anazavana ny tantara sy ny famolavolana ankehitriny.
Rakotra rakipeo 5 an'ny feon-kira tany am-boalohany an'ny sarimihetsika Stanley Kubrick tena ilaina dimy izay mampiseho ny kolontsaina pop.
Disney dia manam-pahaizana amin'ny famerenana indray ny sarimiaina hanamboarana seho mitovy amin'ireo sary mihetsika malaza indrindra.
Manova ny fako ho sary sokitra biby hanaitra ny feon'ny fieritreretana
Bordalo II dia mpanakanto Portiogey izay manodina ny fako hanamboarana azy ho sary sokitra biby izay ezahiny hanetsika ny feon'ny fieritreretana
Sary sokitra eo amin'ny sampana hazo maina izay hamela anao hiteny
Raha ny natiora no fanananao, ireo sary sokitra noforonin'i Debra Bernier ireo dia hamela anao tsy hiteny noho ny hatsaran-tarehiny
Taratasy ho toy ny akora ho an'ireo hatsarana tena kanto ireo
Pippa Dyrlaga dia mampiseho amintsika ny asany sy ny fahaizany miavaka amin'ny teknikan'ny fanapahana taratasy amin'ny asany kanto avo lenta.
Elo feno fahendrena ho an'ny saina mamorona
Raha mila elo manokana sy hafa ianao, dia aza atsahatra ny fotoana voatondro miaraka amin'ireo an'ny Pluvio sy ny fanontana voafetra misy tarika 200.
Colin Cantwell, mpamolavola ny Death Star, X-wing ary Fighter Tie ary sambo Star Wars bebe kokoa
Colin Cantwell dia miantso ny tenany ho mpanoratra, mpamorona ary Maxi-nerd. Ilay nahary ny sambo malaza sary an-tsaina ny Star Wars lehibe.
Ny zavaboary rehetra izay mivoaka avy amin'ny sain'i Sandra Arteaga dia mamorona ary tsy manam-paharoa. Aza manemotra ny fijanonana amin'ny fivarotan'izy ireo.
Salvador Dalí dia mametraka ny fanoharana ny faha 150 taonan'ny Alice in Wonderland izay azo vidiana avy any Amazon.
Roozendaal dia mitondra antsika ao amin'ny Windows Blank Windows, ny zava-kanto farany nataony amin'ny endrika tranonkala izay mitondra anao any amin'ny toerana miala sasatra izay hamindranao ny varavarankely foana.
'Loharanon'olombelona' na anisan'ny rafitra hangalarana ny fiainanao
Ny 'Loharanon'olombelona' dia mitondra antsika amin'ny sanganasa nomerika ataon'ny mpanakanto tsy fantatra iray izay mitsikera ny rafitra ifohazantsika isan'andro.
Ny London Underground dia manolo ny doka galeriana miaraka amin'ny sarin'ankizy izay azo raisina
Ny London Underground mandritra ny tapa-bolana dia ho feno sary an-jatony saka saka mahafatifaty izay manolo ny doka.
Ireo loko kanto amin'ireo tanàn-dehibe izay tsidihin'ity artista koreana ity
Nandehandeha be dia be i Sunga Park tato ho ato ary navelany hosodoko hosodoko tsara tarehy misy trano misy sary famantarana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Mpanakanto iray manova Pokémon ho lasa olombelona
Ity mpanakanto ity dia nanintona Pokémon 245 nandritra ny herintaona, izay nomeny ny fomba fanao maha-olona indrindra, antsipiriany iray mampiavaka azy.
Tranokala 7 misy horonan-taratasy paralaks tsara
Raha fantatrao ny fomba fampiasana ny horonan-taratasy paralaks tsara, dia mety hiteraka fiatraikany lehibe sy traikefa fitetezana ho an'ny mpampiasa miditra amin'ny tranonkala.
Ny aloky ny typografikan'ity graffiti ity dia mamadika ny tranobe rehetra ho sangan'asa kanto
DAKU dia mpanakanto namorona an'ity graffiti ity noho ny aloky ny antoandro eo amin'ny rindrina mankaleo amin'ity trano ity
Sary sokitra amin'ny onjan-dranomasina izay tsy hamela anao tsy hiraharaha
Ireo sary sokitra an-dranomasina noforonina tamin'ny vera ireo dia azo antoka fa ho lasa zavatra fanirian'ny olona tia ranomasina sy natiora.
Nail poloney novana mba hamoronana endrika lamaody mahafinaritra
Ity artista ity dia afaka nampiasa ny volon-koditra manjelanjelatra amin'ireto endrika lamaody kanto nampalaza azy tao amin'ny Instagram.
Ity artista ity dia mamela akanjo lava ao amin'ny Ranomasina Maty mandritra ny 2 taona ary mamadika azy ho sombin-sira sy vera tsara tarehy
Nandao ity toga mainty ity nandritra ny 2 taona ity mpanakanto ity mba hanovan'ny sira ny Ranomasina Maty. Vao tsy ela akory izay no nakany azy ary ireto ny sary.
Ity mpanao sary sokitra ity dia hampino anao fa vita amin'ny hazo ny sary sokitra fa tsy seramika
David White dia mpanao sary sokitra amerikanina izay manana mari-pahaizana marina amin'ny sary sokitra ka sarotra ny afangaro amin'ny fiheverana fa vita amin'ny hazo izy ireo.
Ny Olaimpika dia naneho ny asan'ny mpanao sary, oniversite ary masoivoho. Fanangonana avy any Tokyo 1964 ka hatramin'ny Rio 2016.
Tatoazy minimalista 13 noforonin'ny artista koreana
Minimalism koa dia miasa amin'ny zavakanton'ny tatoazy asehon'ny PlayGround Tattoo avy amin'ny Instagram anazahany ny fahaizany.
Inona avy ireo olana atrehin'ny mpamorona sary isan'andro amin'ny andro fiasan'izy ireo? Vakio hatrany ary zahao amin'ny hatsikana izy ireo!
Ahoana ny fiasan'ny horoscope eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary? Vakio hatrany ary ankafizo ity andiam-panazavana ity!
Inona ny paikady miafina ao ambadiky ny dokam-barotra na ny sary matihanina? Vakio hatrany dia talanjona amin'ireto ohatra ireto!
Dingana 9 hahatafita velona amin'ny fahavaratra raha mpamorona sary ianao
Ahoana no hiatrehanao ny vanim-potoana fahavaratra raha toa ianao ka mpamorona sary ary manana tetikasa miandry? Mamaky hatrany!
Ny zavatra mahazatra toy ny fonony manhole dia mety ho lamina tsara indrindra hamoronana fanontana tany am-boalohany amin'ny T-shirt na kitapo.
"Fanaraha-maso" nataon'i Pawel Kuczynski
Pokémon GO dia hetsika ara-tsosialy ankehitriny ary eran'izao tontolo izao. Ity mpanakanto antsoina hoe Pawel Kuczynski ity dia mitsikera azy miharihary.
'Lightpainting', teknika kanto vaovao tamin'ny taonjato faha-XNUMX
'Lightpainting' dia teknika taonjato faha-XNUMX vaovao izay mampiasa hazavana hananganana endrika endrika ary hanolotra karazana fahatsapana fahitana hafa.
Manambatra ny sary sy zavatra isan'andro nataon'i Kristián Mensa
Kristian Mensa dia mijery ny tontolo manodidina antsika amin'ny fomba hafa mba hamoronana ireo fanoharana mitambatra zavatra sy sary mahazatra.
Ity mpanakanto mahay mampianatra ity dia mizara ny fizotry ny famoronana ao ambadiky ny sary hosodoko mahavariana azy
Berindei no porofo fa ny mampianatra tena dia làlana iray hafa hanarahana an'ireo mpanakanto marobe izay mahatakatra fa ny akademia irery ihany.
Google mandefa fampiharana Zavakanto & Kolontsaina ho an'ny iOS sy Android
Ny Arts & Culture dia fampiharana Google ho an'ny Android sy iOS izay mitondra tranombakoka 1.000 XNUMX, fitsangatsanganana virtoaly ary maro hafa avy amin'ny felatananao.
Firavaka mitaingina aingam-panahy an'ny Game of Thrones izay mamono ny tendanao amin'ny dragona volafotsy tsara tarehy
Ireo firavaka ireo dia hita ao amin'ny andian-dahatsoratra Game of Thrones ihany ary amidy amin'ny tranokala an-tserasera an'ny mpamolavola andiany sasany.
Nasehon'i Shina ity sarivongana goavambe an'i Guan Yu izay maneho ny firahalahiana, ny tsy fivadihana, ny tsy fivadihana ary ny fahamarinana
Yakovlev dia mpanao hosodoko riso monina any Etazonia izay manolotra ity asa ity izay nahatonga ny fo ho mpiorina voalohany.
Ary farany ity sary hoso-doko ity dia lasa sary famantarana ny orinasa mpamokatra Paramount Pictures ary maro amintsika no nifandray tamin'ny sarimihetsika Hollywood maro
Fanta manavao ny marika misy azy: Marina sa tsia?
Nanavao ny endriny marika i Fanta ary nisafidy endrika hafa ankehitriny. Ahoana ny hevitrao amin'ny filokana vaovao?
Mpanao sary sokitra poloney izay mampiasa rano hamenoana ny endrik'ireo loharanony masina
Ilay mpanao sary sokitra poloney Malgorzata Chodakowska dia namorona ireo sary sokitra tsara tarehy ireo tamin'ny endrika loharano izay misy rano ho singa lehibe